Famerenana: 'Rano Mainty: Safodrano ao amin'ny maizina' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Famerenana: 'Rano Mainty: Safodrano ao amin'ny maizina
Famerenana: 'Rano Mainty: Safodrano ao amin'ny maizina
by Jacob Davison Aogositra 6, 2020
by Jacob Davison Aogositra 6, 2020 871 hevitra
Misy zavatra fotsiny momba ny biby mpiremby sy ny loza voajanahary izay tena mamely ny nerveo amin'ny pimalche primal. Karazan-kazo Asa, efa nandroso hatrany amin'ny teboka izay tsy tokony hananantsika ahiahy momba zavatra ambonintsika mihoatra ny faritry ny sakafo izay manaikitra antsika. Saingy, mitoetra ihany ny tahotra. Izay manazava ihany koa ny antony mahatonga ny tena tranganà fanafihana biby tena vaovao tokoa. Isaky ny manafika olona ny orsa na antsantsa dia lohateny lehibe izany. Toy ny nitranga tamin'ny taona 2003, rehefa nisy andian-jatovo tanora nivoaka nankany an'efitra Avaratr'i Aostralia ary nahita fa voahodidin'ny voay masiaka izy ireo. Io no fototry ny sarimihetsika 2007, Rano mainty. 13 taona eo ho eo taty aoriana dia nisy tohiny nipoitra avy tany ivelany Rano mainty: lalina.
Raha niverina tany Aostralia Avaratra i Jennifer, dia natosiky ny sipany Eric (Luke Mitchell) sy ny namany Yolanda, Viktor, ary Cash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) i Jennifer (Jessica McNamee) nanapa-kevitra ny handeha hiteny amin'ny tany efitra Midina amin'ny rafitra lava-bato vao niforona sy toa tsy voakitika. Araka ny fahantrana mahazo azy dia misy tafio-drivotra mahery, manondraka ny lava-bato ary manisy tombo-kase azy ireo. Ary raha tsy dia ratsy izany dia manana vahiny mandady noana be dia be izy ireo.
Ny talen'ny Andrew Traucki dia niara-nitantana ny tantara tany am-boalohany momba ny fahaveloman'ny voay tao Rano mainty ary niasa tamin'ny loza mitatao mitovy amin'ny biby mitokana Ny haran-dranomasina misy mpilomano vs antsantsa. Raha niverina irery izy izao dia niverina tamin'ny fakany tamin'ity fizarana ara-panahy ity. Mampalahelo fa na eo aza ny mety hisian'ny toerana sy ny tetika ary ny fampihorohoroana maharitra ny voay, ny sary mihetsika tsy dia manintona. Manaraka ny sarimihetsika toy ny Mandady ary 47 metatra ambany nahavita nampiakatra ny tsatoka ho avo lenta araka izay azony naleha izy ireo. Ka, raha Rano mainty: lalina manana vinavina mahaliana izay mampanantena loza be dia be, ny fihetsiketsehana sy ny horohoro ataon'ireo fahavalo voay dia mirongatra.
Ny fifantohan-tsain'ny drafitra dia matetika latsaka amin'ny endri-tsoratra maro sy ny ady rehefa mitady ho tafavoaka velona. Izay tsara hamenoana ny halalin'ny toetran'izy ireo bebe kokoa, nefa miaraka amin'izay dia tafiditra ao anaty savony toy ny tantara an-tsehatra. Tahaka ny fanasitranana an'i Viktor amin'ny homamiadana ary ny sasany mihodinkodina mihodina amin'ny fifandraisan'ny tarehintsoratra sy ny fanambarana. Ary andao hiatrika ny zava-misy, eto izahay ho an'ny biby goavambe, amin'ity tranga ity, ny crocs. Miaraka amin'ny fomba fakana sary an-tsarimihetsika dia tsy mahazo betsaka amin'izy ireo isika araka izay tadiavintsika ary tsy mahomby tanteraka ny fampitahorana.
Ny sasany amin'ireo seho tiako indrindra amin'ny sarimihetsika dia tena eo am-piandohana mandritra ny sasin-teny ho an'ny karazana. Mpizahatany japoney mpivady roa (Louis Toshio Okada, Rumi Kikuchi) no miady mafy any ivelan'ny tanàna rehefa sendra nianjera tamina rafitra lava-boay izy ireo. Izy io dia mahatonga ny adrenaline hipoaka na dia fohy aza. Ary ny sarimihetsika dia mampiasa tsara ny valanorano toy ny credo ny kely hitanao dia mampatahotra azy. Ny sasany amin'ireo fotoana mihenjana kokoa dia ny fotoana tsy maintsy andehanan'ny tarehin-javatra mamakivaky ny rano azony, tsy azonao antoka ny fotoana hanafihan'ny iray amin'ireo biby malemy.
Tsy tena mamaky tany io, fa raha te hanana tantara haingana momba ny spelunkers vs voay ambanin'ny tany ianao, dia ho anao izany.
Rano mainty: lalina hits VOD amin'ny 7 Aogositra 2020